> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos & Videos ka Nokia 5800
Card 5800 xusuusta Nokia iskharribeen, baahida loo qabo inay ka soo kabsadaan photos!
My Nokia 5800 kaadhka xusuusta kharribeen! All aan sawiro, videos iyo music tageen. Photos Qaar ka mid ah waa mid aad u muhiim ii. Waxaan leeyahay gurmad lahayn. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado iyaga? Thanks ka hor.
Haddii kaadhka xusuusta aad weli waxaa lagu ogaan karaa your computer, waxaad soo kaban karto dhammaan faylasha ka. Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad bixiso si ay dareenka waa in aad kaarka ka magdhaw jirka ilaaliyaan. Marka jidh ahaan uu burburay, qofna ma caawin kartaa inuu ka soo kabsado sawiro ka Nokia 5800.
Sidee inuu ka soo kabsado photos & videos ka Nokia 5800 kaadhka xusuusta
First of dhan, heli Nokia 5800 soo kabashada qalab lagu kalsoonaan karo. Haddii aad wali raadinayaan mid, waxaa jooga talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , kaas oo caawin kara inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha ka Nokia 5800, xitaa kaadhka xusuusta kharribmay. Waa maxay dheeraad ah, qalab kabashada tani waxay suurtogal in aad dib u soo ceshano oo dhan tirtiray, formatted ama geli photos, videos iyo gabayo fudud 3 tallaabo.
Isku day version maxkamad free of this Nokia 5800 soo kabashada software hadda.
Step1. Connect aad Nokia 5800 in kombiyuutarka
Ka hor inta aadan wax kale samayn, xiriiriyaan Nokia 5800 in kombiyuutarka la cable ah digital, ama si toos ah u xirmaan kaadhka xusuusta hallaysay akhristaha kaarka. Waa in aad comfirm in la si guul ah lagu ogaan karaa oo u muuqda sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas ordi barnaamijka on your computer iyo "Start" Nokia 5800 file soo kabashada.
Step2. Photos Scan, videos oo music aad Nokia 5800
Halkan, xulo Nokia 5800 (sida caadiga ah waxay ku tusaysaa sida warqad drive I), oo guji "Scan" si aad u ogaato dhammaan faylasha aad telefoon.
Step3. Kabsado photos, videos & music ka Nokia 5800
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Nokia 5800 ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.